Addis Ababa oo Qaraxyo lagu fashiliyey! – Rasaasa News
June 4, 2014 – Dawlada Itoobiya ayaa sheegtay in ay fashiliyeen Naftii hurre doonayay in uu naftiisa qarxiyo isaga oo Bomb isku soo rakibay, waxaa haddalkaas laga sii daayay Teleefishinka Xukumada Itoobiya ETV.
Sida Teleefishinku uu sheegay Ciidanka Booliska Federalka gaarka ah, u qaabilsan falalka argagaxisada, ayaa gacanta ku dhigay nin doonayay in uu is qarxiyo, waxayna haddalka raaciyeen in uu hada xidhan yahay.
Faafaahin lagama bixin ninka la qabtay iyo dhalashadiisa midna. Boolisku wuxuu sheegay in ay hayaan xog, in Alshabaab doonayaan in ay qaraxyo ka sameeyaan Caasimada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Dawlada Maraykanka ayaa dhowr bari ka hor ka soo saartay digniin culus, iyada oo dadkeeda jooga Itoobiya uga digtay, gaar ahaan Addis Ababa, wuxuuna Maraykanku sheegay in qaraxyo ay ka dhici doonaan dalka Itoobiya.
xigasho: Ogadentoday Press
Labo Beelood oo ku dagaalamaya Gabalka Shabeele